Kunonoka Kana Kutadza Kudiridzira Mukadzi Kunonoka Kana Kutadza Kudiridzira Mukadzi
Kunonoka Kana Kutadza Kudiridzira Mukadzi
Takambotaura ne nyaya iyi tichiti varume dai mambozamawo kuwedzera nguva yamunopedza muri mukati mevakadzi venyu pakurhojana mudzimba dzenyu, kuti vakadzi vawenewo mukana wekunakigwa nebasa iri roupenyu.
Zvino paita mubvunzo wekuti iwo tingagadzirisa sei nyaya yokuti kune varume vashomanana vane dambudziko rokuti pakurhoja havasviki pachinhanho chokupedza. Tichiti kupedza toreva kubudisa urume. Zvadaro zvoreva kuti vese murume nomukadzi vanoshaya hope nazvo nokuti murume anongoramba akamira chombo. Tobvunza kuti zvinoitiswa nei uye zvinogadziriswa sei. Chokutanga hwisisa kuti dambudziko iri riri kunyika dzese saka hakusi kuti wakaroiwa. Zvikonzero zvacho zvinozikamwa uye kana ukada kuzvigadzirisa unokwanisa kuzvigadzirisa kana mabatsirana nomukadzi.
1. Murume anorhojana nomukadzi wake zvinonakira vese odiridzira kwapera maminitsi oda kusvika kana kupfuura gumi.
2. Murume anorhojana nomukadzi wake zvinonakira vese odiridzira kwapera maminitsi oda kusvika kana kupfuura gumi, asi urume hwake hwoti pakubuda hworasika hwokwira kuno kumusoro kwemachunhu ehurume pane kudzira kunobuda muchombo kunopinda mumukadzi
3. Murume anorhojana nomukadzi wake zvinongonakira iye odiridzira achangopinza chombo mukadzi asati anakigwa kana kubva zemo.
4. Murume anorhojana nomukadzi wake asi otadza kudiridzira zvachose zvokuti chombo chinongoramba chakamira kureva kuti ane zemo, asi hapana chinobuda kwenguva yakareba. Varume vakadai vane mhando dzinoti ... Read The Complete Article At Mai Chibwe VekwaZimuto.